Maqal: Gen Afguduud ” Waa Arin layaableh in Dowlada dhexe 7 bilood ku mashquulsanaato Jubaland” – SBC
Maqal: Gen Afguduud ” Waa Arin layaableh in Dowlada dhexe 7 bilood ku mashquulsanaato Jubaland”
Ka dib markii Madaxweyne loogu doortay Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxaa soo kordhayay Hadalada aan taageereyn Madaxweynaha Cusub ee Jubalanad kaa soo ka soo yeerayay dhinacyo ay ugu horeyaan Madaxda Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Gen C/risaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud oo horay u ahaa Taliyaha Ciidanka policeka Xukuumadii Puntland ee uu horkacayay Alaha u naxariistee C/laahi Yuusuf Axmed, haatanna ku sugan Magaalada Kismaato xarunta gobolka Jubada hoose ayaa kaga hadlay arimaha Jubalanad wareysi uu siiyay Idaacada SBC.
Waxa uu Tilmaamay Generalku in maamulka Jubaland ee uu Madaxweynaha u yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe mid Taageero xoogleh ka heysta shacabka gobolada Jubooyinka iyo Gedo iyo weliba guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meelkasta oo ay joogaan, Maadaama uu yahay mid lagu dhisay Si cadaali ah .
Taageero la’aanta dowlada Federaalka ee maamulkan ayuu ku tilmaamay mid qaldan isagoo u sheegay madaxda dalka in maamulkan lagu dhisay dastuurka federaalka ah ee ay iyaga ku yimaadeen laguna soo doortay.
Dhageyso Warbixin faah faahsan oo uu ka diyaariyay Wariye Jabra.RIIX AMA DAAR
Dhinacyo kale oo badan ayuu ku taataabtay wareysiga uu siiyay Genralku SBC waxana ka mid ahaa rimaha Hadal heynta Dowladu markasta iyo meelkasta ula taagantahay maamulka dhisan ee Jubaland iysagoona sheegay in taasi ay tahay mid aan habooneyn.
Waxa uu sheegay in Hadii dowlada federaalka ay taageeri weysi oo aqoonsanweydo Jubaland aysanna aqoonsaneyn Puntland maadaama ay yihiin dad walaalo ah, laba maamul goboleed oo si sharci ah lagu dhisay iyo dad isku isir ah.